The Sagaal Khaladaadka ugu wareerka badan in ciyaartoyda All Video Game Samee - Rule News
The Sagaal Khaladaadka ugu wareerka badan in ciyaartoyda All Video Game Samee
From illig bootin si loo badbaadiyo shilalka kediska ee ciyaarta, halkan waa qalad ciyaaraha ee aan dhan ka dhigi doonaa mar kale iyo mar kale
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “The sagaal qalad ugu wareerka badan in dhamaan ciyaartoyda video ciyaarta ka dhigi” waxaa qoray Stuart Keith, waayo theguardian.com on Friday 1da April 2016 08.04 UTC
Waxaa jira qaar ka mid ah khaladaad caado ah in aan. Ma caawin kartaa nafteena. Xitaa sida aan u samaynaya, qayb ka mid ah maskaxda our waxaa qeyliyo: "Tani waxay gabi ahaanba waa wax qalad ah in la sameeyo." Laakiin bartey, ka hor inta aannu iyada u aqoonsanno, waxaana ka hor tegey samayseen; waxaan soo iibsaday tigidh si ay u arkaan Batman v Superman.
Mararka qaarkood waxyaalihii dhici in kulan aad u. Wax macno ah ma sida khibrad aad Call of Duty, waxaa jira waqtiyo aad u malaynayso in aad qaadi karto dhowr ciyaaryahan oo soo socda mar by amraya iyaga at la Bistoolad iyo laba xabadood in clip ah. Xitaa haddii aad hore u ciyaaro kulan Raider Qabriga waayo, 10 sano aad weli mararka qaarkood kor u socon doonaa si bohol toosaa oo wuxuu ku fikiri, Waxaan la yaabanahay haddii Lara noolaan karaa dayrta in? Oo markaas waxaad ogaan in ay aysan heli karin. Oo Isbaaro la soo dhaafay ahayd dhowr miles dib.
Halkan, ka dibna, waxaa ka mid ah khaladaad ciyaaraha classic ka taariikhda oo dhan. Add "cadcad" adiga kuu gaar ah qaybta comments.
boodi ayaa kadaba
A Mario dayrta classic. Sawir: Nintendo
Tani waa qalad platforming khada: aad aad u ogaato waa in aan dhacay boodi ilaa pixel hal Mario cagtiisii ​​waa in ka badan ku laayeen - laakiin markaas lagu jiro kor u ordaan, laadadka adrenaline ee, Farahaaga ku bilaabi shimbirka iyo ka hor inta aadan xitaa u ogaado, aad riixaya badhanka … aad hore, diraya geesi moustached our suuroowdo yaamayska hoos u geli. Waayo, markii 24-. Taah loola yaaban hadii ay macquul tahay in dhaqso ah xukuma Super Nintendo qeybtii aad gacmaha u dhashay.
geeska The degdeg ah
Volkswagon qalad ka video YouTube ka wadista, Gran Turismo V shilalka
"Haa, safeeyo doonaa inuu kuu soo dhowaado jeedo hairpin this at 115mph ka dibna ku dhuftay ayuu kala jejebiyey, ka hor inta Cardiff oo, waxa suurto gal tegi karin … Ilaahayow, aan gaariga waa u qortaa-off. "
The guuldareystay Combo ciyaarta dagaalka
Waxaad ka shaqaynayeen sidii Ryu muddo laba toddobaad ah, aad ogtahay oo dhan u dhaqaaqdo uu muhiimka ah, waxaad iyaga ku samayn kartaa iyada oo aan xataa eegaya dirato. Markaas haweenkiinna yimaado badan ee tartanka Street Fighter, oo aad tahay oo dhan diyaar la weerarkii Combo xun, ku lug leh dhowr markooda wareegga quarter iyo diyaariyeen ah ee gacan qaad. Marka ay timaado. Ryu noqon doonaa ammaanta badan. Ryu noqon doonaa kuwo guulaysta. Ryu doono … sameeyo qoob ka matago cajiib ah in yar in aad marnaba arkay ka hor in aad saacado badan oo tababar ah oo degdeg ah. Ken furmay isaga wejiga. Ken Guuleystay.
burburka The erayada ciyaarta u quudhin
Hobbit, wax yar loo beddeli karin
"Waxaad tahay in unugyada xabsi la baararka in ay yihiin oo kaliya cidhiidhi inay u dhexeeya tuujin,"Ayaa sheegay in biimayn soo jiidanaya cusub garaafyada in aad kaliya ku iibsaday aad ZX Spectrum. "On miiska idinka soo hor jeedda waa dhalo ku tilmaamay 'yaraanaya qurub'. Maxaa hadda?"Wixii todobaad, aad soo gashid isku fal-magac oo kala duwan: cabniinka qurub, baabbi'iyee qurub, qurub kabasho, qurub quaff. Ugu dambayntii, barbaro by layaayay niyad aad, inta kale ee qoyskaaga uu ku lug. "Ma isku dayday 'ku margan mana',"Ayaa sheegay in aad Roserio telefoonka ka Hitchen hal habeen. shuqullada Waxba.
Soddon sanno ka dib waxaad ka heli ciyaarta on emulator ah. Waxaad u cabbayso, ku qor in "liqi qurub", oo aad tahay iyada oo qolka xiga dumaya. Waxaad indhuhu at kormeeraha dhowr saacadood aamusnaan ku cel naftaada si, "Waxaan khasaariyey yaraantaydii".
Weerarka badbaadada naxdin argagax
Taken ka video YouTube ah, Xumaan Resident 2 Zombie Surprise weerarkii
Waa wanaagsan, waa wax fiican oo dhan. Waxaad shan xabadood, aad leedahay aad mindi, iyo haddii wax kasta oo aad boogaha, Waxaa jira saddex medipaks dib waxaa ku antechamber ah. Waa si fiican oo ammaan ah si ay u tagaan goobta this sahamin iyo … Zombie yaab! Oh Ciise macaan, waxa button ujeedadu? Waa maxay ujeedada button?! Oh no, aad u qalabaysan duster baal halkii Bistoolad ah - maxaad xitaa aad qabto in aad inventory? Zombie waxaa dhaw qarka u. Haddii aad isku kari waayay qori la … goori goor tahay.
bambaano ee Cadaabka qaarkood
Call of Duty gacmeed ku guuldareysato
Waxaad ciyaaro Call of Honor: Dagaal Modern. "Hey ayaan qaadan karaa roomful dhan cadaawayaashooda kula gacmeed this,"Waxaad u malaynaysaa. "Waxaan kaliya u baahan tahay in ra'iisul iyo … sugaan waxa button tuuro ah? Oh haa, in ay. OK, cuntaan! Oh no, bambaano ayaa kabsatay off dhisme hore aan la arki karin madaxayga kaliya kor ku xusan oo hadda jiifa cagaha ii at. Ma inaan waqti u qaado iyo inuu mar kale soo tuur?" [Sound qarax weyn ku] "Maya. No aanan samayn. "
qoomamo xulashada Character
Concert A by Lorenzo Costa. rinjiyeynta kufaraxsanahay, fasalka qof lousy.
Sawir: Images Heritage / Getty Images
Waxaad tahay 20 saacadood galay biimayn kaalin ka ciyaaro badan xaq Final Dragon sheeko XVII. Bilowga, ciyaarta ha aad xulan ka tiro ka mid ah fasalada qof oo kala duwan; aad u tagteen laga yaabaa Warrior Adkaade, falsan Sage, Eagle-Eyed Archer ama ka Cabsada Warlock. Laakiin ma waxaad sameeyey. Dareen impish oo lid, aad dooratay "Warwareegidda kataaraddii". Hadda, jeeda Heerka a toosaa 40 masduulaagii cadaabta ay neeftiisu ololaysa ayaa halaagnay tuulo badan, go'aankaaga wax badan farxad leh ka yar raadinaya. Waxaad si ba'an raadin iyada oo awoodo gaar ah si aad ikhtiyaarka ugu ba'naa. Waxaa soo baxday in uu noqdo "Balcad plaintive". Waxaa ku guuldareysto.
Ciyaarta ayaa dib u badbaadiyo masiibo
Oregon Trail Sawir: Oregon Trail
Waxaad xaqiiqo ah ka heli karaa ee la soo dhaafay qaybtan ee ciyaarta ka hor inta badbaadinayo, waxa ay noqon doontaa dhibaato ah ma. Waxaan ula jeedaa, aad leedahay in la sameeyo oo dhan waa la laayay ciidankii ORC ah, markaas yaddeena siriqda sun arrow, ka dibna qaadan on yaxaas Tababaraha dhamaadka-of-heer.
Laakiin afar saacadood ka dib, Tababaraha aad dishaa - kaliya sliver ah caafimaadka hartay ay eeg noloshaada. "Dib u bilow kuwii ugu dambeeyey badbaadiyo?"Fudaydsadaa menu ciyaarta. qayb ka mid ah maskaxda kuu ogolaanayaa inaad fantasize aad in si dhab ah sameeyey Hit badbaadiyo, midig ka dib markii gawrici in dagaalyahan ORC 300aad.
Markaasaa la xirey kadibna ciyaarta. Bilowga aad ee heerka. Waxaad dhiman yara teeny gudaha.
showboat The cadaabta
Qaadashada ka YouTube video, Fifa 15 Chip toogtay baasin
Waa ku seconds yar ee Fifa ee la soo dhaafay 16 kulanka u dhexeeya Norwich iyo Barcelona. score waa 1-1, laakiin weeraryahanka la amraya xagga sanduuqa Barca rigoore la daafacyada ma dhow iyo shot cad on gool. Waxaad tahay oo ku saabsan in ay dib u qaado horyaalka heysata horyaalka Bariga Anglia, laakiin ka sii muhiimsan in aad ilbiriqsi ka garaaceen aad saaxiib fiican mar walba ciyaaraa sida Barcelona tahay - oo had iyo jeer ku guuleystay. Laakiin wakhtigan. Ma aha markii this, Messi. Waa wax walba ka sarreeya, waa … Hey, sababta ma qori goolhaye ah? Waxa uu off uu line, uu foundering, aad u ogaato badhamada xaq - waxa jidka wanaagsan ka xariiqay in immensity ee guusha aaddan? Waxay doonaa la hadleynaa this sanado. Waxaad riix Xirfad guuro button iyo biqil.
iibka ayaa kubad birta korkeeda cross. foori dhamaatay The. Ka dib markii waqtigii dheeriga, Norwich lumiya rigoorayaal. Waayo, inta kale ee toddobaadka, mar kasta oo aad ay isku arkaa waxaad cunidda, ayay weydiiyo: "Ma rabtaa in aad chips in?"Waxaad u malayn laga yaabaa in saaxiibtinimo this ayaa ay waddadii loogu tala. Sidoo kale, aad marna mar kale ciyaari laga yaabaa in kulan video.
The Most faa'iido leh, Waa in-Aad Features in Car a
Gift The Greatest waxaad siin kartaa Qoyska 201...
21940	8 Qodobka, Dhaqanka, Features, dhaqanka Game, Ciyaaraha, Keith Stuart, Nintendo, PC, PlayStation, kulan Retro, Doorka ciyaaro, 'Em gan ups, Technology, UK Technology, Madaxweyne Siilaanyo Oo
← Top 20 iPhone iyo iPad Apps iyo Games bisha Harmony Logitech Elite Review →